Sun, May 27, 2018 | 21:44:41 NST
काठमाडौं, साउन २१ – दोलखामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफूले तोकेका व्यक्तिलाई भूकम्प पीडितको सूचीमा नराखिए गुनासो दर्ता गरेका घरको छुट सर्वेक्षण तथा पुनः जाँच गर्न नदिने चेतावनी दिएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।
दक्ष कालिगढको अभावमा विश्व सम्पदा सूचिमा सूचिकृत सम्पदाको काम प्रभावित
काठमाडौं, साउन १९ – विश्व सम्पदा सूचिमा सूचिकृत सम्पदाको पुनर्निर्माण दक्ष कालिगढको अभावमा प्रभावित भएको छ ।
ओखलढुंगामा ५.१ रेक्टर स्केलको भूकम्प
काठमाडौं, असार १८ – ओखलढुंगा केन्द्रविन्दु भएर ५ दशमलव १ रेक्टर स्केलको परकम्प गएको छ । आइतबार बिहान ७ बजेर ४३ मिनेटमा ओखलढुंगाको बरुणेश्वर केन्द्रविन्दु भएर ५ दशमलव १ रेक्टर स्केलको परकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ ।
रामेछापमा ४.२ रेक्टर स्केलको भूकम्प
काठमाडौं, असार १५ – रामेछाप केन्द्रविन्दु भएर ४ दशमलव २ रेक्टर स्केलको परकम्प गएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार बुधबार राति १२ बजेर ९ मिनेटमा रामेछाप केन्द्रविन्दु भएर ४ दशमलव २ रेक्टर स्केलको परकम्प गएको हो ।
किरण लोहनी/उज्यालो । गोरखा, असार १३ – प्राविधिक अभावका कारण गोरखामा व्यक्तिगत आवास पुनर्निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । घर निर्माणका लागि प्राविधिक सल्लाह दिने, निर्माणको चरणको सुपरिवेक्षण गर्ने तथा दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदानका लागि प्राविधिक जाँचपास गर्ने गरी गाउँमा प्राविधिक खटाइएको छ ।
काठमाडौं, असार ८ – राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई परिचालन गरी पुनर्निर्माण र पुनर्लाभमा सहजीकरण गरिदिने व्यवस्था मिलाउन परिपत्र गरेको छ ।
रसुवामा तेस्रो पटक भौगर्भिक अध्ययन सुरु
रसुवा, असार ७ – रसुवामा तेस्रो पटक भौगर्भिक अध्ययन सुरु गरिएको छ । भूकम्पका कारण पहिरोको जोखिममा रहेको जिल्लाको ५१ स्थानमा भौगर्भिक अध्ययन सुरु गरिएको हो ।
‘ए दिलबहादुर दाई घर राम्रो बनाउनुहोला । घर बनिसकेपछि फेरि भेटौंला अनि बसेर सँगै भटमास पनि खाउँला ।’ दोलखाको कालिञ्चोक गाउँपालिका लामिडाडाँका दिलबहादुर सिवाकोटीले बनाउँदै गरेको घर अवलोकनपछि छुट्टिने बेला राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्द पोखरेलले यसै भन्नुभयो ।
किरण लोहनी/उज्यालो । गोरखा, जेठ ३१ – गोरखाको एक विद्यालयको पुनर्निर्माणमा खटिएका कर्मचारीबिचमै कुटाकुट भएको छ । जिल्लाको भिमसेन गाउँपालिका–१ मसेलको विन्द्रावती माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माणमा खटिएका ठेकेदार कम्पनीका कर्मचारी र ईन्जिनियरबिच कुटाकुट भएको हो ।
‘पुरानो अन्तै गए, नयाँसँग भेट्दा आउँछु त भनेका थिए तर अझै आएका छैनन् । कहिले आउने हुन् थाहा पनि छैन । खोज्दै कहाँ जानु बस्ने ठाउँ पनि थाहा छैन ।'
बझाङमा ४.१ रेक्टर स्केलको भूकम्प
काठमाडौं, जेठ १७ – बझाङ केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प गएको छ । मंगलबार राति ११ बजेर २३ मिनेटमा बझाङ केन्द्रविन्दु भएर ४ दशमलव १ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ ।
सिन्धुपाल्चोकमा भूकम्पले भत्किएको एक विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि नेपाल बैंकको सहयोग
सिन्धुपाल्चोक, जेठ १५ – भूकम्पका कारण भत्किएको सिन्धुपाल्चोक तीनघरेको एक विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि नेपाल बैंक लिमिटेडले सहयोग गरेको छ ।
काठमाडौं, वैशाख १९ – भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्लामा झण्डै एक लाख लाभग्राही निजी आवास पुनर्निर्माणको अनुदान पाउन योग्य देखिएका छन् ।
सबै भूकम्प प्रभावित बस्ने सुरक्षित घर बनोस् । अलपत्र परेका विस्थापितको बेलैमा पुनस्र्थापना होस् । भत्केका विद्यालय, स्वास्थ्यसंस्था, सम्पदा पनि छिट्टै बनिसकून् । भूकम्पले दिएको पीडा भुलेर, वैशाख १२ लाई तस्बिरमा खोज्नुपर्ने दिन आओस् । भूकम्प प्रभावितसँगै सबै नेपालीको चाहना हो ।
भूकम्पले भत्केका स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण कहिले हुन्छ ?
ललितपुरको बुङमति स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत सिनियर अनमी पद्मा दाहालको दिन अहिले पनि भूकम्पले चर्केको भवनमा काम गर्दा त्रासमै बित्ने गरको छ । दुई वर्षअघिको भूकम्पले चर्केको भवन अहिलेसम्म पनि पुनर्निर्माण हुन नसकेपछि दिनभर उहाँको दिन त्रासमै वित्ने गरेको हो ।
बाँच्ने आशै थिएन, तर बाँचियो । भूकम्पको दिन सम्झिँदा गोरखा केरौजाका छ्यामबहादुर ओलीलाई अहिले पनि कहाली लाग्छ । भएको घर आँखै अगाडि ढल्यो, जमिन चिरा परेको छ । गाउँमै बस्न सक्ने अवस्था रहेन ।
ललितपुर पाटनका ८७ वर्षका लोकबहादुर शाक्य ९० सालको भूकम्प जाँदा तीन वर्षको हुनुहुन्थ्यो । शाक्य भूकम्प जाँदा पटानमै रहेको मामा घरमा हुनुहुन्थ्यो । सानै भएकोले धेरै कुरा उहाँलाई याद छैन तर एक जना बुढी आमाको कारण आफ्नो ज्यान जोगिएको भने उहाँले बिर्सनु भएको छैन ।
गोरखा भूकम्पको दुई वर्ष : पुनर्निर्माण सुस्त
काठमाडौं, वैशाख १२ – गोरखा भूकम्प गएको मंगलबार दुई वर्ष पूरा भएको छ । दुई वर्षअघि आजकै दिन गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दु भएर ७.८ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो । त्यो भूकम्पले झण्डै ९ हजार जनाको ज्यान गयो ।
भूकम्प गएको दुई वर्ष पुग्नलाग्दा पनि रामेछापका भूकम्प प्रभावितले पानी र काठको अभावका कारण घर बनाउन पाएका छैनन् । खानेपानीकै लागि निकै सास्ती खेप्न बाध्य भएका रामेछापका प्रभावितलाई घर बनाउन थप समस्या भएको हो ।
रसुवामा भूकम्पको कारण ११ वटा वस्ती उच्च जोखिममा परेको भौगर्भिक अध्ययनबाट देखिएको छ। खानी विभागबाट साविकको ७ वटा गाविसको १८ वटा वस्तीमा गरिएको अध्ययनबाट ११ वटा वस्ती जोखिममा परेको पाइएको हो ।
गएको वर्ष वैशाखमा गएको भूकम्पको केन्द्रविन्दु बारपाकमा बनाउन लागिएको भूकम्प स्मृति पार्कको डिजाइन तयार भएको छ । शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले पार्कको डिजाइन तयार पारेको हो ।
गोरखामा भूकम्पका कारण भत्किएका स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणको जिम्मा लिएका गैरसरकारी संस्थाले स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माणमा ढिलाई गरेका छन् । उनीहरु आफैले प्रतिवद्धता गरेको समय भित्र स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण गर्न नसकेका हुन् ।
किरण लोहनी/उज्यालो । गोरखा, चैत २३ – सन् २०१७ सम्ममा सबै नागरिकमा खानेपानीको पहुँच पुर्‍याउने सरकारी लक्ष्य गोरखामा पूरा गर्न कठिन हुने देखिएको छ । सन् २००२ मा नेपाल सरकारले बनाएको जल योजना अनुसार १५ वर्षभित्र सबैमा आधारभुत खानेपानीको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको थियो ।
गोरखाको लाप्राकका भूकम्प प्रभावितले घर बनाउन चाहिने काठ र ढुंगा जुटाइदिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । भौगोलिक बनावटका कारण त्यहाँ ढुंगा र काठपात पाउन समस्या छ ।
भूकम्प प्रभावितलाई घरको साँचो हस्तान्तरण
काठमाडौं, चैत १७ – थाइल्याण्डको नाइन सस्टेनेबल फाउन्डेशन र एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी एआटीले ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाको लुभुमा भूकम्प प्रभावितलाई बनाइ दिएका घरको साँचो प्रभावितलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
सामाजिक तथा जानसाङ्ख्यिक प्रभावसम्बन्धी अध्ययन सार्वजनिक
काठमाडौं, चैत १७ – गएको वर्षको वैशाख १२ को भूकम्पले अति प्रभाावित १४ जिल्लामा पारेको सामाजिक तथा जानसाङ्ख्यिक प्रभावसम्बन्धी अध्ययन सार्वजनिक गरिएको छ ।
गोरखामा भूकम्पले भत्केका संरचना बनाउन चितवनबाट काठ ल्याइने
गोरखा, चैत १४ – गोरखामा भूकम्पले भत्केका संरचना बनाउन चितवनबाट काठ ल्याइने भएको छ । भूकम्प प्रभावितको घर बनाउन चितवनबाट १० हजार क्युफिट काठ ल्याइने जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति गोरखाले जनाएको छ ।
बझाङ, चैत १३ – शनिबार बेलुका ७ बजेर २७ मिनेट जाँदा बझाङको लेकगाउँबाट २० किलोमिटर उत्तरमा केन्द्रविन्दु भएको ३ दशमलव ८ रिक्टर स्केलको भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको भूकम्प मापन केन्द्र, सुर्खेतका टेक्निकल असिस्टेन्ट तीर्थ दाहालले जानकारी दिनुभएको छ ।
पाँच लाखभन्दा बढी भूकम्पप्रभावित घरधुरीले पहिलो किस्ता पाए
भूकम्पको दुई वर्ष बित्न लाग्दासमेत अतिप्रभावित १४ जिल्लाका केही पीडितले अनुदान सम्झौता गर्न पाएका छैनन् ।
गएको वर्ष वैैशाख १२ गतेको भूकम्पका कारण ब्यक्तिगत आवास भत्किएकाहरुले सरकारले दिने दोस्रो किस्ता पाउन सकेका छैनन् । भूकम्प गएको २२ महिना बित्न लाग्दा समेत भूकम्पपीडितहरुले राहतको दोस्रो किस्ताको अनुदान रकम पाउन नसकेका हुन् ।
मंगलबार मध्यदिनमा गोरखा सदरमुकामको हरमटारी रंगशालामा एक्कासी मान्छेहरु गुहार माग्दै चिच्याएको आवाज सुनियो । मान्छेहरु रोएको, चिच्याएको, गुहार मागेको र भूकम्प आयो भनेर कराएको सुनेपछि वरपरका बासिन्दा साँच्चैको भूकम्प आएको हो कि भनेर अलमलमा परे ।